Xisbiga Hantiwadaaga islaamka oo Warmurtiyeed kasoo Saaray Hadalkii Madaxweyne Faroole uu ku Dhaliilay Qaybsiga Wasiirada.
24 nov 2010 SMC Xisbiga Hantiwadaaga islaamka ku dhisan wuxuu si aad ah u inkirayaa isagoo cambaaraynaya goaamadda dowlad-goboleedka Puntland ee ku aadan qaabkii uu Ra'iisal Wasaare Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo u soo xushay wasiiraddiisa. Waxaan u aragnaa haddalada ka soo yeeraya maamulka Puntland kuwo ka aradan maamuuska. Waxa muuqata in raiisulwasaare Farmaajo u soo xushay wasiiraddiisa inta badan si xor ah oo aan cidi u yeerin ama ku qasbin. In lagu tuhmo hawshaas cadiimka ah u qabtay in cid kale ka danbayso waa jariimo loo gaystay sharaftisii iyo karaamaddiisii. Madaxda Puntland waxaan ku boorrinaynaa inay ugu hambalyeeyaan wanaagga uu soo qabtay mudane Farmaajo. Xisbigu wuxuu kaloo ku guubaabinayaa hogaanka Puntland inay si aan sharuud lahayn ula shaqeeyaan xukuumadda lana jaanqaadaan caqliga Soomalida cusub iyo inay dhamaatay anaaniyaddii iyo nin tooxsigii.
Xukuumaddaani xukuumad wanaagsan weeye, Xubnaha asalakoodu ka soo jeedo Puntland oo kujirana xubno wanaagsan weeye, dhinac kastoo laga eego, xag aqoon iyo xag kartiyeedba. Duruurina ma ahan in ay matalayaan dowlad goboleedka Puntland ee waxay matalayaan soomali oo dhan, qabaailka ay ka soo jeedaan waxaa loogu doortay si loo buuxiyo nidaamka 4,5 oo ah nidaam soomaaliyi ku heshiisay inay wax ku qaybsato. Wax lala yaabo ayay noqotay iyo fadeexad weyn in nidaamka Puntland uu tuhun iyo dood ka keeno sida Raiisulwasaare farmaajo oo runtii ay xukuumaddisa ka dhex muuqdaan goaan wanaag iyo cadaalad uu wax u qaybiyay. Xisbiga hanti-wadaaga islaamka ku dhisan wuxuu ceebaynayaa isagoo si aad ah uga xun qaab dhaqanka kuwa hogaamiya Puntland. Waxa aad rabtaan waxa weeye in dowladda Fedaraalka ah lagu daro kuwa idinku aad maamushaan oo rabitaankiina khaaska ku dhex jooga dowladda dhexe, waana arrinta sabab u ahayd in dowladdihii hore shaqaynwaayeen. Suurtogal maahan wasiir ku jira dowladda dhexe inuu halkaas u joogo inuu ilaaliyo danaha khaaska ah Puntland. Wuxuu Wasiir u yahay Jamhuuriyyada Soomaliya oo dhan. Saas darteed waa inuu yahay mid u madaxbanaan goamadiisa. Daacadnimda iyo kalsoonida wasiirku marka koobaad waa inay noqoto mid ku wajahan xukuumadda uu ka tirsanyahay iyo barnaamijka ay ku shaqaynayso, cidda kaliya uu ka amar qaataana waa inay noqoto raiisulwasaaraha xukuumaddaas hogaamiya.
Puntland waxa kaliya oo ay bannaantahay inay ka hadasho qaab dhismeedka xukuumadda waxa weeye markii uu khalal ku yimaado nidaamkii wax qaybsiga beelaha oo ay arkaan satbursi inuu jiro iyo dulmi, laakiin meel ay ku qorantahay in ay iyadu xubno ay soo barakaysay lagu daro xukuumadda federaaliga ah ma jirto, mana haboona aslan inay awoodaas yeelato. Xakuumaddaan waxaa lagu soo xulay aqoon iyo karti iyadoo la tixgaliyay nidaamkii waxqaybsi-beeleedka. Xisbiga hanti-wadaagga islaamka ku dhisan wuxuu ugu baaqayaa hogaanka Puntland inay ixtiraamaan shacabka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaliyeed kuna ekaadaan salaaxiyaadkooda iyo xuduudda awoodooda.
Xisbigu wuxuu sido kale si adag u inkirayaa in lagu goodiyo in Puntland laga gooyn doono jamhuuriyyadda Soomaliya. Puntland way ka weyn tahay mashruuc siyaasiyiin dano gaar ah lahi ay ku shaqaystaan Ma jirto sabab taariikheed, siyaasadeed ama kuwo dhaqan dhaqaale oo Puntland u suurtogalin kara inay ka godo jamhuuriyyadda inteeda kale. Shacabka Puntland magaciisa in lagu qaraabto waa khatar weyn oo mustaqbalka fog iyo kan dhowba dhaawac u gaysan karta sumcadda iyo karaamadda reer Puntland. Sidaas darteed koox iyo shaqsiyaad rabitaankooda khaaska ah waa inaan loo siyaasadayn mustaqbalka ummadda.
Ugu danbayn Xisbiga hanti-wadaaga islaamka ku dhisan hogaankiisa mid sare iyo mid dhexe iyo xubnihiisa guud wxay si ay xamaasadi ku dheehantahay ugu hambalyaynayaa shacabka soomaliyeed meel kastoo ay joogaanba in lagu guulaystay markii koobaad muddo labaatan sano ah inaan yelano xukuumad u qalanta shacabka soomaaliyeed oo ah shacab leh taariikh iyo ilbaxnimo guun ah. Wuxuu kaloo Xisbigu si adag ugula dardaarmayaa xukuumadda iyo hogaamiyaheeda mudane Faramaajo inay si daacad ah ugu shaqeeyaan ummadda oo ayna cidna ugu alaakoodin maslaxadda iyo danaha ummadda, isla markaasna ayna dhag jalaq u siin akeekanka kuwa danaha gaarka ah leh. Nin lagu seexdoow ha seexan xilbaad siddaa ha seexan
mubarakwarsame@hotmail.com> Members Photos